March 2016 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Anonymous at 12:52:00 PM 0
Anonymous at 9:11:00 AM 0
Facebook ဟာ ကမ္ဘာ့လူသုံးအများဆုံး လူမှုကွန်ရက်တစ်ခု အဖြစ် ရပ်တည်နေနိုင်ပါပြီ။ ဒီလို ရပ်တည်နေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ Facebook ဟာ သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်မှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ လျှို့ဝှက် စွမ်းဆောင်ချက်တွေကို ထည့်သွင်းပေးထားလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Facebook ကို လူတိုင်း လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်ပေမယ့် သူ့ရဲ့ လျှို့ဝှက်စွမ်းဆောင်ချက်တွေကို အသုံးပြုတတ်ရင် Facebook မှ သူငယ်ချင်းများနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုရှိခြင်း၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အကြောင်းအရာများကို အခြားလူများ မသိစေခြင်း၊ ပို့စ်များကို ရှာဖွေရာတွင် လွယ်ကူခြင်း၊ ပို့စ်များကို သိမ်းဆည်းခြင်း ၊ Mobile Data ကုန်ကျမှုကို သက်သာစေခြင်း၊ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာများကို တားဆီးနိုင်ခြင်း စတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများအပြင် အခြား ပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းတဲ့ ရလဒ်များကို ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Facebook Messages မှ “ Seen “ ကို ပိတ်ခြင်း။
သင် စာမပြန်ချင်တဲ့ လူတစ်ယောက်က သင့်ထံ Message ပေးပို့လိုက်တဲ့အခါမှာ အဲဒီ Message ကို သင်ဖတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ ပေးပို့သူက သင် ဖတ်ပြီးကြောင်း “ Seen” Read Receipts ကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဖတ်ပြီးကြောင်းကို တစ်ဖက်လူက မသိစေချင် Browser Extension များကို အသုံးပြုပြီး Disable လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Facebook Unseen Chrome Extension ၊ Firefox နဲ့ Internet Explorer တို့အတွက် Chat Undetected တို့ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းများရဲ့ မွေးနေ့ကို Google Calendar , iCal , Outlook တို့မှာ ထည့်သွင်းခြင်း။
သင့် သူငယ်ချင်းများရဲ့ မွေးနေ့ကို သတိမေ့နေတာမျိုး မဖြစ်ရလေအောင် Calendar များမှာ ထည့်သွင်းထားနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်ဘက် Sidebar မှ Events Page ထဲသွားပြီး Upcoming Events နဲ့ Birthdays ထဲမှ လင့် တစ်ခုကို ကော်ပီလုပ်ပါ။
Google Calendar ကို ဖွင့်ပြီး Others Calendars ဘေးမှ မျှားကို နှိပ်ပါ။ Add by URL ကို နှိပ်ပြီး URL ကို Paste လုပ်ပါ။
iCal မှာ Calendar> Subscribe ထဲသွားပြီး URL ကို ထည့်ပေးပါ။
Outlook မှာ Tools> Account Settings> Internet Calendars ထဲသွားပါ။
Facebook Messages မှ “ Other “ Inbox ကို ကြည့်ရှုပါ။
သင့်မှာ Facebook Messages များအတွက် Inbox နှစ်ခုရှိပါတယ်။ “ Other” Inbox ထဲမှာတော့ သင့် သူငယ်ချင်းမဟုတ်သူများက ပေးပို့ထားတဲ့ စာများကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်သူငယ်ချင်းမဟုတ်သူများက သင့်ရဲ့ အဓိက Inbox ထံ တိုက်ရိုက် စာပေးပို့ချင်ရင်တော့ Facebook ကို အခကြေးငွေပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကျော်များအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ Fans များမှ ပေးပို့တဲ့ စာများကို “ Other” မှာ ဖတ်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Facebook Search ဟာ သင့်သူငယ်ချင်းများက သင်နဲ့ မျှဝေထားတဲ့ ပို့စ်များကို ရှာဖွေရာမှာ အလွန်အစွမ်းထက်လာပါပြီ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် တင်ထားတဲ့ ပို့စ်ကို ရှာချင်ရင် သူ့ရဲ့ နာမည်ကို အရှေ့မှာ ရိုက်ထည့်ပြီး အနောက်မှာတော့ ပို့စ်မှာ ပါတဲ့ Keyword စကားလုံးကို ရိုက်ထည့်ပေးပြီး ရှာဖွေရင် လွယ်ကူပြီး ထိရောက်မှာပါ။
GIF များ တင်ပါ။
Facebook မှာ GIF များတင်လို့ ရပါပြီ။ GIF ရဲ့ လင့်ကို ကော်ပီကူးပြီး Status Box မှာ Paste လုပ်ပါ။ Preview ပေါ်လာရင် လင့်ကို ဖျက်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ Friends List ကို ဖွက်ထားပါ။
Friends Tab ထဲသွားပြီး ညာဘက်မှ Edit Privacy ကို နှိပ်ပါ။ Only Me ပြောင်းပေးရင် သင့်ရဲ့ Timeline ထဲဝင်ကြည့်သူများက သင့်ရဲ့ Friends List ကို မမြင်နိုင်တော့ပါဘူး။
သင့်ရဲ့ ပို့စ်ကို မမြင်စေချင်သူများကို သတ်မှတ်ပါ။
သင့်ရဲ့ သူဌေးမမြင်စေချင်တဲ့ ပို့စ်တစ်ခုကို တင်တော့မယ်ဆိုရင် Privacy Settings ကို နှိပ်ပြီး Custom ကို ရွေးပေးပါ။ “ Don’t share this with” မှာ သင့်သူဌေး အမည်ကို ရိုက်ထည့်ပြီး ရွေးပေးပါ။
News Feed မှ Auto-Play Video များကို ကြိုတင်ပိတ်ထားပါ။
Facebook က News Feed မှာ ဗီဒီယိုများ အလိုအလျှောက် ပြသဖို့ ပြုလုပ်နေပါတယ်။ အချို့နိုင်ငံများမှာတော့ Auto-Play Video များကို မြင်တွေ့နေရပါပြီ။ ဒီလို Auto-Play Video များကို ကြိုတင်ကာကွယ်ထားချင်ရင် Facebook App>App Settings> Videos and Photos > Auto-Play ထဲသွားပြီး Smart Auto-Play ကို Disable လုပ်ပါ။ User WiFi Only ကို ရွေးပေးပါ။ အခြားဖုန်းများမှာတော့ Facebook App> App Settings> Videos play automatically မှာ Off လုပ်ပေးပါ။
Game Requests များကို ပိတ်ပါ။
Facebook App ကနေ More> App Settings> Notifications> Mobile Push ထဲသွားပြီး Application Requests မှာ အမှန်ခြစ်ကို ဖြုတ်ပါ။ အခြားဖုန်းများမှာ More> App Settings> Notifications > Application requests မှာ Off လုပ်ပေးပါ။
Relationship Status ကို အခြားသူများ မသိအောင် ပြောင်းပါ။
သင့်ရဲ့ Relatiionship Status ကို အခြားသူများ မသိအောင် ပြောင်းချင်ရင် Timeline ကနေ About Tab ထဲသွားပါ။ Family and relationships မှ Privacy Settings မှာ Only Me ပြောင်းပေးပြီး Relationship Status မှာ နှစ်သက်ရာကို ပြောင်းပါ။ Save Changes ကို နှိပ်ပါ။
Facebook မှာ နေ့စဉ် မျှဝေကြတဲ့ သတင်းများ၊ဆောင်းပါးများစွာ ရှိပါတယ်။ ဖတ်ဖို့ အချိန်မရလို့ နောက်မှ ဖတ်ဖို့ သိမ်းဆည်းထားချင်ရင် ပို့စ်ရဲ့ ညာဘက်မှ Drop-Down Arrow ကို နှိပ်ပြီး Save link ကို နှိပ်ပါ။ သိမ်းထားတာတွေကို ဒတ်စတော့မှာ ညာဘက် Sidebar မှ Saved ကဏ္ဍနဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းမှာ More> Saved ကဏ္ဍတို့မှာ ပြန်လည် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ref - http://www.blog.myanmardigitallife.com/ မောင်ပေါက်< Knowledge Note >
Anonymous at 8:56:00 AM 0
၁။ ထပ်ကာထပ်ကာ ကြိုးစားတယ် (Keep Working Hard)
အောင်မြင်မှုရဲ့ ပထမအချက်ကတော့ သိပ်ကိုရိုးရှင်းပါတယ်။ မကြိုးစားရင် မအောင်မြင်နိုင်တဲ့အတွက် ကိုယ်ကအောင်မြင်ချင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဆို
ကိုယ်ဟာ ကြိုးစားတဲ့သူတစ်ယောက် ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးသင့်ပါတယ်။ တကယ်လဲ ကြိုးစားပါတယ်ဆိုရင်တော့
သင်ဟာ အောင်မြင်ဖို့ တစ်ဝက်သေချာပါပြီ။ နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့ ကြိုးစားတတ်ပြီဆိုရင် မြေကြီးလက်ခပ်မလွဲ သင်ဟာ အောင်မြင်သူတစ်ယောက်
၂။ အတောက်လောင်ဆုံး လောင်ကျွမ်းပစ်ပါ (Ignite the fire)
သင်ဟာ သင့်ပညာရေးမှာ စိတ်အားထက်သန်မှုရှိလား? သင်ဟာ သင့် အိမ်မက်တွေအပေါ်မှာ စိတ်အားထက်သန်မှုရှိလား? သင်ဟာ
တကယ်ပဲ သင်ဟာ စိတ်အားထက်သန်မှုရှိတယ်ဆိုတာ သေချာရင်တော့ သင့်ဆန္ဒတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် လောင်ကျွမ်းလိုက်ပါ။
ဘဝမှာ တွေ့ရမယ့် ကြားကအတားအဆီးတွေကျော်ဖြတ်ဖို့ လက်နက်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
၃။ ကွဲပြားခြားနားပါစေ (Be different)
အများလျှောက်တဲ့လမ်းကိုလိုက်ရင် အများရောက်မယ့်နေရာတွေပဲ ရောက်မှာပါပဲ။ မဆန်းပါဘူး။ ဒီတော့ အောင်မြင်မှုကို သရဖူဆောင်းမယ်ဆိုရင်
သင်ဟာ သူများနဲ့တူစရာမလိုပါဘူး။ သူများနဲ့ နှိုင်းယှဉ်စရာမလိုပါဘူး။
ဒီနေရာမှာတစ်ခုသတိထားရမှာက လမ်းသစ်ထွင်မိတဲ့အခါ လမ်းမှားတွေ၊ ခက်ခဲတွေလမ်းတွေ သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မပူပါနဲ့။
သင့်မှာသာ လုံလောက်တဲ့စွမ်းအင်ရှိရင် သင်လိုရာအရပ်ကို ရောက်နိုင်မှာပါ။
၄။ အောင်မြင်မှုလမ်းမပေါ်မှာ အရှုံးတွေရှိတယ် (Fail your way to success)
"ကျွန်တော့်ရဲ့ သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ အချက်ပေါင်း ၉၀၀၀ ကျော်လောက် လွဲချော်ဖူးတယ်။ ပြိုင်ပွဲပေါင်း ၃၀၀ လောက်လဲ ရှုံးနိမ့်ဖူးတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ဘဝမှာ ထပ်ကာထပ်ကာရှုံးနိမ့်နေခဲ့တယ်။ ဒါ့ကြောင့်ပဲ နောက်ဆုံးမှာ ကျွန်တော်အောင်မြင်လာခဲ့တယ်"
ဒီစကားက ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးအကျယ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဘတ်စကတ်ဘော အားကစားသမား မိုက်ကယ်ဂျော်ဒန် ပြောခဲ့တဲ့စကားပါ။
အောင်မြင်မှုလမ်းမပေါ်မှာ အရှုံးတွေရှိပါတယ်။ အားမလျော့ပါနဲ့။ ဆက်လျောက်ပါ။
၅။ မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးထားပါ (Have High Expectation)
"လူအတော်များများက ဘဝမှာ ရှုံးနိမ့်ကြတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့က ရည်မှန်းချက်မြင့်မြင့်ထားပြီး လွဲချော်ခဲ့လို့မဟုတ်ဘူး။
ရည်မှန်းချက် နိမ့်နိမ့်လေးထားပြီး အဲ့လောက်ကလေးပဲ ရခဲ့လို့ပါ။
ခင်ဗျားစိတ်ကူးကြည့်ဗျာ။ ခင်ဗျားက ဆယ်ထပ်လောက်မြင့်တဲ့တိုက်ရှေ့ကနေ ဘောလုံးလေးကိုင်ပြီး ရပ်နေမယ်ပဲထား။ တကယ်လို့
ခင်ဗျားဟာ ၂ ထပ်ကို ချိန်ပြီး ဘောလုံးကို ပစ်လိုက်ရင် ၆ ထပ်ကို ရောက်နိုင်ပါ့မလား? ဒါပေမယ့် ခင်ဗျား ၁၀ ထပ်ကို ချိန်ပြီး ပစ်ရင်တော့
၆ ထပ်လောက်တော့ ရောက်နိုင်ပါသေးတယ်"
ဒါဟာ မိုက်ကယ်ဂျော်ဒန် ပြောခဲ့တဲ့စကားပါ။
၆။ အပြုသဘောဆောင်ပါ (Be positive)
အောင်မြင်ဖို့အတွက် အပြုသဘောဆောင်တတ်တဲ့စိတ်က အခြေခံအနေနဲ့ကို လိုအပ်ပါတယ်။ ဘယ်ကစပြီး ဒီစိတ်ကိုမွေးရမှန်း မသိဘူး
ဖြစ်နေလား? သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ သင်ပေါင်းသင်းပါ။ အလိုလိုကူးစက်လာပါလိမ့်မယ်။
၇။ သင်မွေးလာတဲ့အတိုင်း သင်နေပါ (Be who you were born to be)
သင်အောင်မြင်ချင်တာ သဘာဝကျပေမယ့် သင်ဟာ တခြားတစ်ယောက်အနေနဲ့ အောင်မြင်စရာမလိုပါဘူး။ ဥပမာ- သင်ဟာ သင့်ရပ်ကွက်ထဲက
သူဌေးကြီးလို အောင်မြင်စရာမလိုပါဘူး။ သင်ဟာ မောင်ဖြူဆို မောင်ဖြူပုံစံအတိုင်းပဲ အောင်မြင်ပါ။ သင်ဟာ မောင်ညိုဆို မောင်ညို့အနေနဲ့ပဲ
၈။ အမြင်ရှိပါ။ အတွေးရှိပါ (Have Vision)
နောက် ၅ နှစ်ကြာရင် ဘာဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမျို။ နောက် ၁၀ ဆယ်နှစ်ကြာရင် ဘာဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမျိုး အတွေးအမြင်တွေက သင့်အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းကို
၉။ ဆင်ခြေပေးနေတာတွေကို ရပ်လိုက်ပါတော့ (Stop making excuses)
ကျွန်တော်က ဆင်းရဲလို့၊ ချို့တဲ့လို့။ ဘာဖြစ်လို့။ ညာဖြစ်လို့ဆိုတဲ့ ဆင်ခြေဟာ သင့်ကို အောင်မြင်မှုနဲ့ အဝေးဆုံးတွန်းပို့ပါလိမ့်မယ်။
သင်ဟာဘာပဲဖြစ်နေနေ၊ လက်ရှိရောက်နေတဲ့နေရာကနေ ကြိုးစားလိုက်ပါ။ အောင်မြင်မှုဆိုတာ အပြောလွယ်သလောက်၊ အလုပ်ခက်ပါတယ်။
၁၀။ လေ့ကျင့်ပါ (Practice)
သင်ဟာ ပိုထူးချွန်ချင်ပါသလား? ဒါဆို အလွယ်ကူဆုံး၊ အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံးကတော့ ထပ်ကာထပ်ကာ လေ့ကျင့်ပါ။
Anonymous at 8:52:00 AM 0
သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာကို ဖြတ်သန်းတဲ့အခါမှာ ဒီအချက်လေးတွေ ပါဝင်ဖို့ ဂရုတစိုက် လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
(၁) စိတ်အဟာရ ဖြည့်တင်းခြင်း
နေ့တစ်နေ့ရဲ့ အစရောက်တဲ့အခါမှာ လူတွေဟာ မနက်စာစားကြသလိုမျိုး စိတ်ကိုလည်း အဟာရပြည့်အောင်
တစ်ခုခုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက် စိတ်အားတက်ကြွစရာတွေ၊ အားအင်ဖြစ်စေမယ့် အကြောင်းအရာတွေကို
တွေးလိုက်သင့်ပါတယ်။ အားပြည့်နေတဲ့စိတ်ဟာ သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာကို အကောင်းမွန်ဆုံး ဖြတ်သန်းစေပါလိမ့်မယ်။
(၂) Plan ဆွဲခြင်း
စိတ်ကို အဟာရဖြည့်ပြီးတာနဲ့ တစ်နေ့တာအတွင်း ကိုယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကို အစီအစဉ်ချလိုက်ပါ။
လုပ်စရာရှိတာတွေ၊ သွားစရာရှိတာတွေ၊ တွေ့စရာရှိတာတွေကို အစီအစဉ်တကျဖြစ်အောင် စီပါ။ ဒါမှလည်း
သင့်ရဲ့အချိန်တွေ အလေအလွင့်မဖြစ်စေဘဲ အလုပ်တွေလည်း အဆင်ပြေပြေ ပြီးမြောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချခြင်း
ကိစ္စကြီးကြီးမားမားတွေကိုမှ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချနေရတာမဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်းဟာ ကိစ္စသေးသေးလေးတွေကိုလည်း
အချိန်တိုင်း ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချနေရပါတယ်။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်လေးတွေကပဲ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အောင်မြင်မှုချင်း
ကွာဟသွားစေတာပါ။ စာကြည့်တိုက်သွားမလား၊ Game ဆိုင်သွားမလား။ အလုပ်လုပ်မလား၊ အိပ်မလား။ စသဖြင့်ပေ့ါ။
တစ်နေ့တာအတွင်း ချမယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းဟာလည်း ကိုယ့်အတွက် အကျိုးရှိစေမယ့်အရာတွေဖြစ်ဖို့ ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။
(၄) ခန္ဓာကိုယ် အစာရဖြည့်ခြင်း
လူတစ်ယောက်ရဲ့တစ်နေ့တာမှ စိတ်အဟာရတွေချည်းပြည့်ပြီး အောင်မြင်အောင်၊ တိုးတက်အောင်ဆိုပြီး အားထုတ်နေလို့
မပြီးသေးပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်း အဟာရပြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့သင့်တော်တဲ့ အစားအသောက်တွေ၊ ကျန်းမာရေးအတွက်
အဟာရဖြစ်စေမယ့်အရာတွေကိုလည်း စားသုံးဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တာ ဖြတ်သန်းမှုထဲမှာ ဒီအချက်ကိုလည်း
ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာ အချက်တစ်ချက်အနေနဲ့တောင် တကူးတက လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ တစ်နေ့လုံး
အလုပ်တွေ ထိုင်လုပ်နေလို့လည်း မဟုတ်သေးပါဘူး။ အမြဲတမ်း ငေးငိုင်အနားယူနေလို့လည်း မဖြစ်သေးပါဘူး။ အလုပ်လုပ်ချိန်မှာ
အလုပ်ကို သေချာလုပ်ပြီး ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုလည်း ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။
Unknown at 7:39:00 AM 0
Computer software Screen Capture
အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံး Lightshot - Screenshot Tool
Maung Pauk at 10:32:00 AM 0
Lightshot ဟာ PC သမားတွေအတွက် အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံး Screenshot ဆိုရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူး.. လွယ်လွယ်ကူကူပဲ ကိုယ်ယူချင်တဲ့ Screenshot ကို ယူနိုင်ပါတယ်.. တိုက်ရိုက် Upload လည်းတင်နိုင်ပါသေးတယ်.. ရိုက်ဖို့အတွက် ကီးဘုတ်ပေါ်က Print Screen ကီးကိုနှိပ်လိုက်ပြီး Area သတ်မှတ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ.. ဒါဆိုရင် Upload လုပ်မလား၊ Save လုပ်မလား။ အညွန်းလေးတွေထည့်ဖို့ Arrow တွေ၊ Rectangle တွေ၊ Marker နဲ့ Line တွေလည်းပါပါတယ်..
Anonymous at 10:04:00 AM 0
အထက်တန်းကျောင်းသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ် Google က အဓိကကျတဲ့ သင်ကြားရေး အထောက်အကူတစ်ခု ဖြစ်လာပါပြီ။ ကျောင်းသားတွေအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ Google Tips and Tricks များကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
သင်သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ အတိအကျကို လျှင်မြန်စွာရှာပါ။
လူတိုင်းက Google Search ကို အသုံးပြုတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Google Search ကို ထိရောက်စွာ အသုံးပြုတတ်သူရှားပါး ပါတယ်။
ဝက်ဆိုက်တစ်ခုထဲက ဆောင်းပါးတစ်ခုကိုရှာမယ်ဆိုရင် site: “ website URL” ရှာဖွေသည့်စကားစုကို အသုံးပြုပါ။ စာရေးဆရာနာမည်နဲ့ ရှာနိုင်ဖို့ author: “name” လို့ရိုက်ရှာနိုင်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးရဲ့ ခေါင်းစီး ကို ရှာဖွေချင်ရင် intitle: “word” လို့ရှာဖွေပါ။
Filetype: “jpg or other extension” လို့ရိုက်ပြီး ဖိုင်ဖော်မက် အလိုက် ရှာဖွေပါ။
(*) Asterisk ကို Wildcard Search Operator လိုအသုံးပြုပြီး Google ကို ကွက်လပ်ဖြည့်ခိုင်းလို့ရပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် Thomas Edison invented * လို့ရိုက်လိုက်ရင် Thomas Edison တီထွင်ခဲ့တာတွေကို Google က ပြသပေးပါလိမ့်မယ်။
Site operator ကို အသုံးပြုတဲ့နေရာမှာ အခြားအသုံးပြုနည်းတွေရှိပါတယ်။ site:edu လို့ရိုက်ရှာရင် ပညာရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဝက်ဆိုက်တွေကိုပဲပြပေးပါလိမ့်မယ်။ site:edu advanced chemistry exams လို့ရိုက်ရှာခြင်းဖြင့် chemistry စာမေးပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ပညာရေး ဝက်ဆိုက်တွေမှာ ရှာဖွေပေးပါလိမ့်မယ်။ Site Operator နဲ့ Filetype Operator တို့ကို ပေါင်းစည်းပြီးတော့ စာမေးပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့ eBook တွေရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ Google Search Operator တွေကို Google Help Page မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Google က Advanced Operators တွေကို ပြုလုပ်ပေးထား ပါတယ်။ History / Politics ကျောင်းသားတွေက site:gov ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Related: operator ကို အသုံးပြုပြီး ဆင်တူတဲ့ ဝက်ဆိုက်တွေကို ရှာနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ အားဖြင့် related:www.thatantoeaung.com လိုရှာရင် သန်းတိုးအောင် ဝက်ဆိုက် နဲ့ ဆင်တူတဲ့ ဝက်ဆိုက်တွေကို ပြပေးပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ ဆရာ က အချို့သော ဝက်ဆိုက်တွေကို အသုံးပြုခွင့်မပေးဘူးဆိုရင် minus sign ကို အသုံးပြုပြီး အဲဒီဝက်ဆိုက်တွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် encryption – site:Wikipedia.org လို့ရိုက်ရှာရင် encryption နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဝက်ဆိုက်တွေကို ရှာပေးမှာဖြစ်ပေမယ့် Wikipedia ဝက်ဆိုက်ကိုတော့ ပြသပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဓိပ္ပါယ် နှစ်မျိုးရှိတဲ့ စကားလုံးတစ်ခုကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာ တစ်မျိုးကိုရှောင်ရှားချင်ရင်လည်း အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဥပမာ jaguar – car လို့ရှာခြင်းဖြင့် ကားတွေကို ရှာဖွေခြင်းမပြုတော့ဘဲ အခြားအဓိပ္ပါယ် များကိုသာရှာဖွေပေးပါလိမ့်မယ်။
အထက်ပါ Operators တွေကို ပေါင်းစပ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
စကားလုံးတစ်ခုရဲ့ Definition ကို သိနိုင်ဖို့ define “word” လို့ ရိုက်ရှာပါ။
Google ကို သင်္ချာတွက်ခိုင်းလို့ရပါသေးတယ်။ Google Search မှာ အပေါင်း၊ အနုတ်၊ အမြှောက်၊ အစား စတဲ့ Operator တွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ 7% of 1543 , 2*3*7 စတာတွေအပြင် Advanced Opetators တွေများစွာရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ယူနစ် ပြောင်းလဲမှု တွေကို လည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် 50 feet လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ အခြားယူနစ် တွေကို Google က ပြပေးပါလိမ့်မယ်။
Google ကို ကွက်လပ် ဖြည့်ခိုင်းလို့ရပါသေးတယ်။ Martin Luther King Jr. was born on လို့ရိုက်လိုက်ရင် January 15 1929 လို့ ပြပေးပါလိမ့်မယ်။
Anonymous at 10:01:00 AM 0